Football Khabar » बार्सिलोनालाई हल्यान्डको ‘ग्रीन सिग्नल’ : ट्रान्सफर मूल्य कति ?
जर्मन क्लब बोरुसिया डर्टमुन्डका गोल मेसिन युवा खेलाडी अर्लिङ हल्यान्डका एजेन्ट मिना राइओलाले आफ्ना खेलाडी ला लिगा क्लबमा जान खुला रहेको बताएका छन् । ‘टेलिग्राफ’सँग कुरा गर्दै उनले हल्यान्डले डर्टमुन्ड छाडेको अवस्थामा ला लिगा क्लबबाट खेल्न चाहेको स्पष्ट पारेका छन् । हल्यान्ड ला लिगाका कुनै एक ठूलो क्लबमा जान सक्ने कुरा उनले स्वीकारेका छन् । नर्वेका २० वर्षीय हल्यान्ड गत समर सिजनमा अस्ट्रियन क्लब रेडबुल साल्जवर्गबाट अप्रत्यासित रूपमा डर्टमुन्ड पुगेका थिए ।
जर्मनी पुगेदेखि नै हल्यान्ड शानदार लयमा छन् । अहिले उनी बुन्डेसलिगामा एक गोल मेसिन युवा खेलाडीका रूपमा चम्किरहेका छन् । र, उनीमाथि युरोपका अन्य ठूला क्लबले नजर लगाइरहेका छन् । खास गरी स्पेनकै क्लब रियल मड्रिडले हल्यान्ड भित्र्याउन सक्ने चर्चा सरुवा बजारमा छन् । तर, बेला–बेला हल्यान्डको नाम बार्सिलोनासँग पनि जोडिएर आउने गरेको छ । बार्सिलोनाको बोर्डमा चुनाव लडेर आउन उम्मेदवारी घोषणा गरेका केही व्यक्तिले आफूले चुनाव जिते हल्यान्ड भित्र्याउने घोषणा नै गरेका छन् ।
हल्यान्ड स्पेनका दुई ठूला क्लब रियल मड्रिड र बार्सिलोनामध्ये कुन क्लबमा जालान् ? यसबारे उनका एजेन्ट राइओलाले खुलाएका छैनन् । तर, हल्यान्ड रियल र बार्सिलोना जुन क्लबबाट पनि खेल्न सक्ने विषयमा उनले स्पष्ट पारेका छन् । ‘उनी अहिले डर्टमुन्डमा निकै खुसी छन् । तर यो साँचो हो कि, उनी भविष्यमा ला लिगा खेल्न चाहन्छन् । उनले मसँग यस विषयमा खुलेर कुरा गरेका छन्,’ एजेन्ट राइओलाले भनेका छन् ।
राइओलाले हल्यान्ड यो सयका उत्कृष्टमध्ये पहिलो वा दोस्रो नम्बरका युवा खेलाडी भएले उनी बासिलोना अथवा रियल मड्रिडबाट खेल्न योग्य रहेको पनि बताएका छन् । ‘आजसम्म मलाई स्पेनका क्लबबाट औपचारिक प्रस्ताव आएको छैन । तर, मलाई सोध्नुहुन्छ उनी रियल मड्रिड वा बार्सिलोना कुनै पनि क्लबबाट खेल्न योग्य खेलाडी हुन्,’ राइओलाले भने, ‘बार्सिलोना वा रियल मड्रिड वा अन्य ठाउँबाट राम्रो प्रस्ताव आउँछ भने हामी टेबुलमा बस्न तयार छौं ।’
‘ट्रान्सफर मार्केट’का अनुसार अहिले २० वर्षीय हल्यान्डको बजार मूल्य १६० मिलियन युरो रहेको छ । गत नोभेम्बमा उनकोे बजार मूल्य १०० मिलियन युरो मात्रै थियो । हल्यान्डमाथि स्पेनको रियल मड्रिड र बार्सिलोनासँगै प्रिमियर लिगका लिभरपुल र म्यानचेस्टर युनाइटेडको समेत नजर रहेको छ । लिभरपुलका प्रशिक्षक जोर्गेन क्लोपले हल्यान्डमाथि खास इच्छा देखाएका छन् ।
प्रकाशित मिति २० माघ २०७७, मंगलवार १८:५२